Jirama – Toamasina : tsy mbola voavaha tanteraka ny delestazy | NewsMada
Jirama – Toamasina : tsy mbola voavaha tanteraka ny delestazy
Nisedra olana ny famatsiana herinaratra eto Toamasina, nanomboka ny 26 jona teo. Nijery ifotony ny olan’ny milina ao amin’ny tobim-pamokarana herinaratra any Betainomby ny tompon’andraikitry ny Jirama eto Toa­masina, ny faran’ny herinandro lasa teo.
Fantatra fa simba ny milina lehibe miisa telo, an’ny Jirama, ary simba koa ny milina roa an’ny orinasa tsy miankina Enelec, mamokatra sady mivarotra herinaratra amin’ny Jirama.
Nambaran’ny talen’ny fa­mokarana herinaratry ny Ji­rama, Lezavarison Michel Georges, fa tsy nisy afa-tsy 17,5 MW ny herinaratra nisy teto Toamasina, nanomboka ny 26 jona teo, raha 25 MW ny tanjaka ilaina mamatsy ny mpanjifa. Tonga aty an-toerana ny teknisianina avy any Torkia, manamboatra ny sim­ba, ka tokony ho vita ny asabotsy 4 jolay teo ny milina simba iray ka hiakatra 20,5 MW ny tanjaka. Manana 2,5 MW isanisany (5 MW) koa ny an’ny Enelec ka tokony ho ampy raha vita avokoa ireo.
Na izany aza, mbola mitohy ny fanamboarana ka efa nihena ny delestazy ka ma­nomboka amin’ny 5 ora hariva hatramin’ny 9 ora alina no tena ahitana fahatapahana.
Ankoatra izany, manamafy ny tompon’andraikitry ny serasera Jirama Toamasina, i Chadly Wander Assany, fa tsy nisy ny fahadisoana tamin’ny faktiora, tsy toy ny any Anta­nanarivo. Niova kosa anefa ny fomba fiasa satria efa tonga sahady isan-tokantrano ny faktiora, efatra andro aorian’ny fakana ny tarehimarika amin’ny kaontera ka faktiora roa tao anatin’ny iray volana.